OGEYSIIS: Fursado shaqo oo ka bannaan Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed – Radio Muqdisho
Guddiga Qaranka Ee Shaqaalaha Rayidka Dowladda Federaalka ah, wuxuu dadweynaha Soomaaliyeed oo shaqo doonka ah u baahinayaa sagaal (9) jego oo ka bannaan Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed. ciddii leh aqoonta iyo qibradda shaqooyinkan shuruudahooda halkan ku lifaaqan, waxaa lagu wargelinayaa inuu ka codsan karo bogga Guddiga oo halkan hoosa kaaga muuqdo. Nasiib wacan
Fadlan Link-gan hoos riix si aad u dalbato shaqooyinkan;
Haddii aad u baahato caawin, fadlan la soo xiriir ciwaanka hoos ku qoran;
Haddii aad u baahato caawin dhanka online application ah, fadlan la xiriir lambaradan hoose;
+252-615-499-078 / +252-615-503-693
Kulan looga hadlayay horumarinta bilicda Caasimadda oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO”